Ungabaphoqa kanjani ohulumeni ukuthi bashintshe ngenkathi unganaki izixuku? : UMartin Vrijland
Ungabaphoqa kanjani ohulumeni ukuthi bashintshe ngenkathi unganaki izixuku?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-8 November 2019	• 8 Amazwana
Sibonile imibhikisho eminingi emasontweni asanda kwedlula futhi kuyacaca ukuthi abalimi abaningi, abakhi nabanye abaningi bathukuthele. Uma kwenzeka into efana nale, uzobona ukuthi osopolitiki nabezindaba bazolawula umonakalo. Izinhlelo zethelevishini ezifana nalezo zikaJeroben Pauw ikakhulukazi zingamakhosi kulokhu kulawulwa kokulimazeka nokulawula ukuqonda.
Abasebenzi bokunakekela abasebasha kumele bavikeleke ebudloveni babazali abathukuthele esikhundleni sabazali abathukuthele bavikeleke kubo ukuhlukunyezwa azungeze umshini wokupompa imali lapho abaningi bethola khona imali abayiphilayo, imvamisa ngaphandle kokubheka ukuhlupheka komuntu. Amasosha kumele avikeleke kosopolitiki abakholwa ukuthi ukubulala ngamabhomu empeleni kungokubulala. Uma abalimi bethukuthele, ngisho nenamba yamaphephandaba yenkulumo-ze eyi-1 isilungele ukubika ukuthi abantu abaningi eNetherlands bakholelwa ukuthi umbuso usungene ezilinganisweni zawo eziluhlaza. Uma konke kuphuma esandleni ufuna ukuzivalela ngokwakho. Kubukeka sengathi abantu abaningi baseDashi bavuka kuphela lapho kushaya isikhwama sabo noma umsebenzi ophephile. Ubuntu buvame ukubonakala bukwehlisa umsebenzi wakhe noma umsebenzi wakhe, kodwa uma isikhwama sakhe noma ukuphepha kwakhe kuthintwa, kungcono kakhulu ukuvukela.
I-2019 Ikakhulu, kungunyaka lapho wonke amaqembu ochwepheshe abasebenza ngqo noma ngokungaqondile umbuso ebukeka esongelwa, ehlaselwa noma ebulewe. Hhayi abameli kuphela, kepha manje nabathengi, ababhekele ukunakekelwa kwentsha nezintatheli kumele bathole ukuvikelwa kombuso. Ngabe lokho mhlawumbe kusho okuthile malini nokwesaba okwenzekayo emphakathini futhi ngenxa yalokho kubangelwa ukuhlupheka komuntu siqu okungakanani? Izintatheli ziyizisulu zalabo ababizwa ngokuthi yizigelekeqe, kodwa lokho ikakhulukazi kuhloswe ngakho ukuvumela abasakazi abangochwepheshe ukuthi baqhubeke nokukhiqiza izindaba zabo ezingekhohlakele ngokungazibandakanyi. Awunasisekelo? Yebo, impela inesisekelo esihle, ngoba sibonga izindaba zalezi zintatheli kanye nabaphathi bokuqonda eminyakeni yamuva nje, manje sinofakazi abangaziwa ngomqhele noma umthombo ongaziwa futhi empeleni konke kungenziwa futhi kuqulwe ngabezindaba manje kunikeza ukumiswa komphakathi.
Uma izinto zivela kancane, ngaso sonke isikhathi uhlelele ukuphikiswa ngendlela yezinyunyana nezemihlangano yezepolitiki. Cishe uyakhumbula ukuthi uWim Kok waba kanjani usopolitiki ovela kumholi wezinyunyana zabasebenzi. Izinyunyana zabasebenzi zikhona ukuze kube khona ukumelana emphakathini kuvimbela umusi ngendlela elawulwayo. Kwenzeka okufanayo emaqenjini ezepolitiki nakubantu bawo bangaphambili. Konke ukunambitheka emphakathini kungalinganiswa ngohlelo olukhulu lwedatha noma izibalo zokubuka futhi kungathonywa ngomsakazo, i-TV kanye nemikhosi yezokuxhumana eqondisa ingxoxo. Futhi uma kusongela ukuhamba kancane, uthumela usopolitiki ku-limousine yakhe ebizayo enesudi futhi ephelezelwa ngamakhamera amaningi ukuketula abantu ngenkulumo enoboya, ekhombisa lokho okuthiwa ukuqonda, kepha umyalezo lapho okusele okukodwa kwe "kuyadingeka futhi kumele senze njalo". Ngabe ucabanga ukuthi uMark Rutte ukhathazekile ngisho nangesikhwama sakho noma inhlala-kahle yakho? Ngabe ucabanga ukuthi ngisho nosopolitiki oyedwa noma umphathi oyedwa obona okhokha kakhulu kwi-tube unendaba nenhlala-kahle yakho? Cha.
Ngakho-ke uma sifuna ukuguqula okuthile emphakathini, khona-ke akufanele nje sibambe ama-pitchforks uma zizishaya thina, kepha manje yisikhathi sokuqala ukubheka ngokuyisisekelo ukuthi yikuphi okungahambi kahle. Kulokho udinga ukubheka ngalé kwezokuxhumana nepolitiki. Bheka ngalé kwekhala lakho. Lokhu kuphathelene nezinguquko eziyisisekelo kithi, ukuthi umbono wethu wezwe unjani futhi udlalwa kanjani. Uma siqala ukubona ngazo zonke izindlela esidlalwa ngazo futhi senziwa ngazo, singashintsha futhi nalolo daba ngesisekelo esibalulekile. Lokho akunakwenzeka ngokubeka i-tipp-ex esikrinini. Kulokhu kumele sisho izimbangela ngamunye ngamunye. Kufanele senze ubuqili nokukhohlisa zonke izendlalelo ukubona ngohlelo futhi ufulathele lelo qhinga nenkohliso. Ngokuyisisekelo asikhulumi nje kuphela ngabezepolitiki, abaphathi bemibono yabezindaba (njengoJeroben Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, njll.), Kodwa futhi nangokuphikiswa okulawulwayo kwezepolitiki, kwezinhlangano zabasebenzi nasendleleni yokungena emphakathini.
Encwadini yami entsha ngidingida zonke izingqimba zokukhohlisa futhi ngiza nesisombululo esakhiwe kahle. Isikhathi sokungena ngempela emsebenzini futhi ukuthi ukungena esenzweni kuqala ngokubona kuzo zonke lezo zingqimba zokuhlela ngokoqobo njengoba sicabanga ukuthi siyakubona. Ingabe ufuna ngempela ukuthengisa incwadi yakho iVrijland? Bengilokhu ngibhala i-7 kule webhusayithi ngokuzithandela futhi lokho kungibize kakhulu. Kodwa-ke, angikwazi ukufingqa kangcono leyo minyaka ye-7 kunencwadi, yingakho ngithathe inkathazo. Kafushane futhi kuze kube seqophelweni, kodwa ingilazi icacile futhi ibhaliwe phansi ngothando. Ngifaka amandla amaningi kuyo, ngoba ngombono wami okuthile kufanele ngempela kuguquke. Isikhathi soshintsho olukhulu kwezenhlalo futhi olungafika kuphela uma amehlo evuleka ngokukhazimulayo nangezindlela zonke. Ngenze konke okusemandleni ami. Hlala uthule noma unyakaze. Ingabe ubamba iqhaza?
UGeert Wilders uhlubuki olawulwayo
Thierry Baudet uzokwenza iNetherlands ibuyele futhi! Ngempela!
8 November 2019 ku-15: 19
Ngicabanga ukuthi imibhikisho ebikhona kukhona empeleni mincane.
Ngabe imibhikisho iqalelani! Nada. Uma ubhikisha kufanele uqhubeke uze uzuze okuthile bese kumnyama kokumhlophe. Ngaphandle kwalokho "abokufika" abokufika bazokuhlekisa nje futhi sebevele bayitholile leyo mbhikisho encanyana embhalweni wabo wokuthi ngolunye usuku lwemibhikisho.
8 November 2019 ku-16: 06
Eqinisweni, kungenzeka ukuthi banama-pawns abo enhlanganweni ..
"Indlela engcono yokulawula ukuphikiswa ukuholela ngokwakho"
8 November 2019 ku-16: 34
Kunjalo, kusebenza kanjani, kepha njengoba ngishilo ngaphambili, "ngenhlanhla siphila" emthethweni. " Ukukhwehlela.
Qhathanisa isimo samanje njengokuhlanganiswa kwesimo sikaGeorge Orwell nezwe elisha lesibindi likaHuxley. Ukuhlanganiswa okuhle, i-cocktail, akumelwe kuphuthelwe. Ama-Cheers Guys ayaqhubeka nokusebenzisa iskripthi sakho.
12 November 2019 ku-00: 33
Lapho ngivakashela abazali bami ngabona okulandelayo kuthelevishini:
Kuthathe isikhashana ngaphambi kokuthi ngiqonde ukuthi kungani kube nokuphendula okunamandla kangaka nangokomzwelo (futhi ngombono wami okungenangqondo) kulesi sihloko nguRenske Leijten. Ekugcineni kuphathelene neqembu elincane labantu be-8500 okucasule kakhulu kubo, kepha kukhona ukuhlukunyezwa okukhulu kuhulumeni. Kuze kube semzuzwini we-22: I-05 i-mantra yosuku lwanamuhla iphindwe yaphendulwa ngumethuli: "Kepha kubi kangakanani lokhu, empeleni lo hulumeni ophenduka nezakhamizi zakhe". Engikushoyo ngalokho ukuthi uhulumeni kufanele avikele izakhamizi zawo kepha wehluleka ukwenza njalo.
Sihlangane kuphi nesikhonzi esasimemezela kakhulu lokho? "Uhulumeni ukhona ukuvikela izakhamizi zawo futhi wehlulekile kakhulu."
Kwesinye isikhathi ngicishe ngivume ukuthi zisebenza kahle kangakanani izindlela ezisetshenziswayo. Abazali bami babenemodi ngokuphelele "yamahloni !!". Kwesinye isikhathi ngifisa ukucacisela abazali bami ukuthi ukunakwa kwabo kuhlanekezelwa kanjani kulokho okwenzekayo ngokuya ngokujulile kakhulu endabeni encane kodwa ethinta imizwa.
Okwamanje ngayiyeka leyo mizamo. Uma i-psycholance yenza ukubukeka kwayo (kufinyeleleke ngenombolo yocingo i-11-11, kuhle, kabili inombolo yokuhlanya, ilashi!) Nginovalo lokuthi ngizobizwa ekuqaleni kwesikhashana ...
12 November 2019 ku-00: 44
“Kudingeka ukuthuthwa okufanelekile ngoba abantu abangazange benze icala lobugebengu abawona emotweni yamaphoyisa. Ngaphezu kwalokho, i-ambulensi imvamisa ayidingekile kulokhu. Ngokusebenzisa izinto zokuhamba ezifanele, laba bantu bathuthelwa ngokomsebenzi ngendlela ephephile, emnandi, engenabandlululo. Kunikezwe uxhaso lokushayela indiza okufanelekile yi-ZonMW isikhathi esingangonyaka. Ngalesi sikhathi, kuzobhekwa ukuthi kuthengiswa kangaki futhi nini kufanelekile. Futhi ukuthi lokhu kwenzeka kanjani ngabantu abathuthwa: abantu abanokuziphatha okudidekile nabathandekayo babo. ”
Woza eGeorge Orwell ... ubuqonde lokhu ngenkulumo entsha?
"Kuthuthwa ngendlela ephephile, emnandi, engenalo ucwaso, emsebenzini"
12 November 2019 ku-00: 51
I-psycholance ingukucaciswa kwesabelo esinikezwe omasipala nguhulumeni ukuthola indlela esebenza kahle ye-1 ngo-Okthoba 2018 maqondana neqembu le-People neConfuse Behaeve.
12 November 2019 ku-01: 13
Damn, bengingazi ukuthi into enje iyashayela! Ngenhlanhla ngihlala entshonalanga yezwe!
Isilinganiso esivela ku-athikili engenhla:
“Noma kunjalo, amaphoyisa kufanele abhekele i-psycholance njalo. Ngemuva kwalokho umenzeli ushayela ukuphepha kwabasebenzi. Ngonyaka wesibili lapho i-psycholance isebenza, kungabonakala ukwanda okuncane kokuhlukumezeka. "Lokhu kunjalo futhi ngoba sishayela ngaphezulu, kodwa namaphoyisa ayazi ukuthi angasithola kuphi," kuchaza uHendriks. "Futhi njengasemphakathini, kukhona futhi ukwanda kodlame ngathi."
Umakhelwane wami wangaphambili usebenze njengomfowethu we-ambulensi impilo yakhe yonke. Ngabuza ukuthi ingabe ulaka olubhekiswe kwabasebenzi be-ambulensi selukhuphukile yini eminyakeni edlule. Impendulo yakhe yayicacile: “Cha, bekulokhu kufana ngayo yonke leyo minyaka. Umehluko ukuthi ngenxa yokubonga nobumnandi kwezokuxhumana, abanye ozakwethu kwesinye isikhathi bayaziswa ngaphambi kokuthi ngibuyele eziseleni. ”
12 November 2019 ku-10: 19
Yebo, abantu abaningi sebevele bangeniswe kwi-gulag ye-GGZ
« Iyini ngempela inkinga ye-nitrogen, kungani abalimi bekhononda futhi kungani behlise isivinini?
Isinyathelo sokuqala sinelebuli, isinyathelo sesibili ukushiywa ngaphandle: inkinobho yokugomela »
Ukuvakashelwa okuphelele: 13.789.280
Hlaziya op URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa ku-New World Order" uyakufakazela lokhu: IJensen.nl ilawulwa ukuphikiswa
Ukushona kwelanga op Ngabe sekuqalile ukuhlaselwa? I-Psycholance yayivele inikezwe ukukhanya okuluhlaza ku-2018 ngokususelwa ecaleni le-Els Borst / Bart van U.
guppy op Ngabe sekuqalile ukuhlaselwa? I-Psycholance yayivele inikezwe ukukhanya okuluhlaza ku-2018 ngokususelwa ecaleni le-Els Borst / Bart van U.
Ukushona kwelanga op URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa ku-New World Order" uyakufakazela lokhu: IJensen.nl ilawulwa ukuphikiswa
Joyina abanye ababhalisile abangu-1.682